हातको औँला यस्तो हुने व्यक्ति हुन्छन् अधिक पैसावाल, तपाईको पनि छ की ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/हातको औँला यस्तो हुने व्यक्ति हुन्छन् अधिक पैसावाल, तपाईको पनि छ की ?
१) यदी कसैको इंडेक्स फिंगर अर्थात चोर औँला मिडल फिंगर अर्थात माझि औँलासँग बराबर छ वा सामान्य भन्दा थोरै लामो छ भने यस्ता व्यक्ति पैसा वाला र अन्य व्यक्तिमाथि रा जगर्ने हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति बढी अधिकारी र व्यापारमा संलग्न हुने गर्दछन्।२) चोर औँला माझि औँलाभन्दा धेरै लामो छ भने यस्ता व्यक्ति धेरै घमण्डी हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिले आफूलाई निकै ठूलो सम्झिने गर्दछन् र यिनीहरुको स्वभाव तानाशाही प्रवृतिको हुने गर्दछ।
३) चोर औँलाको लम्बाई साान्यभन्दा कम छ भने त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि काम गर्न उत्त्साहित हुँदैनन्। यस्ता व्यक्ति महत्वकांक्षी भने हुने गर्दछन्।४) ओर औँला अनामिका औँला अर्थात रिंग फिंगरभन्दा ठूलो छ भने त्यस्ता व्यक्ति कहिलेकाही निकै उत्साहित भएर काम बिगार्ने हुन्छन्। कहिलेकाही यिनीहरुले धन हानीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छन्।५) अनामिका औँला र चोर औँला दुबै बराबर हुन्छन् भने त्यस्ता व्यक्ति अधिक पौ र मान सम्मान प्राप्त गर्ने इच्छा राख्ने गर्दछन्। यदी चोर औँला थोरै छोटो हु्न्छ भने यस्ता व्यकित हर परिस्थितीमा सन्तुष्ट हुने खाले हुन्छन्।